Tag: kumbira mutengo | Martech Zone
Tag: kumbira mutengo
Mazuva ano, angangoita ese analytics maturusi kunze uko rega iwe uteedzere kubaya zviitiko. Kubaya kunomiririra kwakawanda kwekudyidzana kune mushandisi newebsite yako. Asi kana uchinge uine iyo data, ikozvino chii? Iwe unogona kuteedzera pese pese kudzvanya kunoitwa nemushanyi, asi ndiwo mafashama e data kuti upepete. Dzvanya kuteedzera, kana ichinge yaiswa mushe, inogona kuva chimwe chezvishandiso zvine simba kwazvo zvekunzwisisa chaizvo kuti vanhu vanopindura sei zvemukati mako uye sei